.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဓမ္မတေး Flash Song များ
ဒီနေ့ သီတင်းကျွန်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့
တရားတော်တွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ဓမ္မတေးတွေ ၊ မိဘမေတ္တာကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းတွေ ၊ Flash Song လေးတွေကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ၊ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်..။
ဘုရားပုံတော် ဓမ္မစကြာတရားဦး ဟောဟန် (ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးနှင့်)
မေတ္တာပို့တေး ဓမ္မစကြာတရားဦး ဟောဟန် (ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးမပါ)
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ (၇)နေ့ ဘုရားရှိခိုး လျောင်းတော်မူ မြတ်ဘုရား
တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ ရွတ်ပွားပုံ ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း
ဘုန်းတော် (၆)ပါး ဓမ္မတေး
“ဂုဏ်တော်ကိုးပါး” “ဗုဒ္ဓပူဇနီယ” “ချမ်းချမ်း"
(၃၈-ဖြာ မင်္ဂလာ) “မေတ္တသုတ်ပရိတ်မြန်မာလို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း”
( ငါးပါးဂုဏ်အင် .. ) Coming Soon
Posted by Thurainlin at 20:59
Labels: Flash Song, ဓမ္မတေး